Ny fanandramana dia tonga amin'ny endrika samihafa. Tany aloha, mpikaroka nahita fa manampy ny mandamina fanandramana miaraka amin'ny laboratoara fitohi- eo amin'ny fanandramana sy ny saha fanandramana. Ankehitriny, anefa, ireo mpikaroka dia tokony handamina fanandramana ihany koa amin'ny alàlan'ny fifandimbiasana faharoa eo amin'ny fanandramana analoga sy ny fanandramana nomerika . Ity sehatra fananganana roa dimanjato ity dia hanampy anao hahatakatra ny tanjaka sy ny fahalemen'ireo fomba fanao isan-karazany ary hanasongadina ireo sehatra faran'izay tsara indrindra (sary 4.1).
Sary 4.1: Famoronana drafitra fanabeazana ho an'ny fanandramana. Nandritra ny lasa, ny fanandramana dia niova tamin'ny alàlan'ny lab-field. Ankehitriny, miovaova amin'ny alàlan'ny dika mitovy amin'ny dizitaly koa izy ireo. Ity sehatra fananganana roa dimanjato ity dia asehon'ireo fanandramana efatra izay ambarako ato amin'ity toko ity. Raha ny hevitro, ny sehatra goavana indrindra dia ny fanandramana an-tserasera.
Ny endrika iray izay ahafahana mandamina ny fanandramana dia ny endriky ny lab-labour. Fanandramana marobe amin'ny siansa sosialy dia fanandramana avy amin'ny laboratoara izay ahafahan'ny mpianatra mpianatra manao asa hafahafa ao amin'ny laboratoara ho an'ny fianarana. Ity karazana fanandramana ity dia miorina amin'ny fikarohana ara-psikolojia satria ahafahan'ny mpikaroka manangana seha-pifaneraserana hifehezana mba hitokana sy hizaha ny teoria manokana momba ny fitondran-tena. Ho an'ny olana sasany anefa, dia somary hafahafa ihany ny zavatra sasany amin'ny fanatsoahan-kevitra mivaingana momba ny fitondrantenan'olombelona avy amin'ireo olona tsy mahazatra izay manao asa tsy mahazatra toy izany ao anatin'izany toe-javatra mahazatra izany. Ireo trangan-javatra ireo dia nitarika fihetsiketsehana ho an'ny fanandramana an-tsekoly . Ny fanandramana eo amin'ny sehatra dia mampifandray ny endrika matanjaka amin'ny fanandramana fanaraha-maso mifandanja miaraka amin'ireo vondrona mpandray anjara maromaro kokoa manao asa mahazatra kokoa amin'ny sehatra natiora.
Na dia mieritreritra ny fomba fanao amin'ny labiera sy ny saha aza ny olona sasany, dia tsara kokoa ny mieritreritra azy ireo ho fanampiny, miaraka amin'ny hery sy ny fahalemena samihafa. Ohatra, i Correll, Benard, and Paik (2007) nampiasa ny fanandraman'ny laboratoara sy ny fanandramana an-tsaha amin'ny fiezahana hitady loharanon'ny "sazy an-tranomaizina". Any Etazonia, ny reny dia tsy mahazo vola noho ny vehivavy tsy manan-janaka, na dia Mampitaha vehivavy manana fahaiza-manao toy izany miasa amin'ny asa tahaka izany. Maro ny fanazavàna azon'ity lamina ity, ny iray amin'ireo dia ny fampiasana ny mpampiasa hanohitra ny reny. (Mahaliana fa ny mifanohitra amin'izany dia toa marina ho an'ny raim-pianakaviana: mikasa ny hahazo vola mihoatra noho ny lehilahy tsy manan-janaka izy ireo.) Mba hanombanana ny mety ho fanoherana ny reny, i Correll sy ny mpiara-miasa dia nanao dingana anankiroa: iray ao amin'ny laboratoara ary ny iray eny an-kianja.
Voalohany, tamin'ny fanandramana avy amin'ny laboratoara dia nilaza tamin'ny mpandray anjara izy ireo, izay nahazo mari-pahaizana tao amin'ny oniversite, fa ny orinasa dia nitady asa ho an'ny olona iray hitarika ny sampan-draharaham-barotra ara-barotra East Coast. Nolazaina ny mpianatra fa naniry ny fanampiana azy ireo ny orinasa, ary nangatahana izy ireo mba hamerina hamerina mitahiry ireo kandidà marobe ary handany ny kandidà amin'ny sehatra maromaro, toy ny fahatsapany, ny hafanana ary ny fanoloran-tena hiasa. Ankoatra izany, nanontaniana ireo mpianatra raha toa ka hanome toro-hevitra amin'ny fampandehanana ny mpangataka izy ireo ary inona no mety horaisin'izy ireo ho karamaina fanombohana. Na dia tsy fantatry ny mpianatra aza, ny resadresaka dia natsangana manokana mba hitovitovy amin'ny zavatra iray: ny sasany amin'izy ireo dia mampiseho ny maha-reny (amin'ny alalan'ny lisitra fandraisana anjara amin'ny fikambanan'ny ray aman-dreny) ary ny sasany dia tsy. I Correll sy ireo mpiara-miasa dia nahita fa tsy dia nanam-bintana loatra ny mpianatra hanolotra ny reny ary nanome azy ireo karama ambany kokoa. Ankoatr'izay, tamin'ny alalan'ny fandalinana ny statistika ny fanapaha-kevitra sy ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny fandraisana mpiasa, i Correll sy ny mpiara-miasa dia nahita fa ny fahasamihafan'ny renim-pianakaviana dia nohazavaina betsaka noho ny maha-ambany indrindra azy ireo noho ny fahaiza-manaony sy ny fanoloran-tenany. Noho izany, ity experiments labra ity dia namela an'i Correll sy ny mpiara-miasa mba handrefesana ny vokatra azo avy aminy ary hanome fanazavana mety ho an'izany.
Mazava ho azy, mety tsy sahy manonofinofy ny fanatsoahana ny tsena momba ny tsenan'ny asa amerikana iray manontolo mifototra amin'ny fanapahan-kevitr'ireo zafikelin'ny zato sasantsasany izay mety tsy hanana asa manontolo andro mihitsy, na dia efa nokaramain'ny olona aza. Noho izany, Correll sy ireo mpiara-miasa koa dia nitarika fanandramana fanampiny. Namaly ny fanokafana asa an-jatony an-jatony izy ireo miaraka amin'ireo taratasy fanoratana sandoka sy ny famerenana. Tahaka ireo fitaovana nasehon'ireo anjerimanontolo ireo, ny sasany dia namerina nateraky ny reny ary ny sasany tsy nanao. Nilaza i Correll sy ny mpiara-miasa fa tsy dia voatery hiantso ny resadresaka ny reny raha oharina amin'ny vehivavy tsy manan-dray. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mpampiasa tena manao fanapahan-kevitra mifanohitra amin'ny toe-javatra voajanahary dia nitovy tamin'ireo olon-dehibe. Nanao fanapahan-kevitra mitovy amin'izany koa ve izy ireo? Mampalahelo fa tsy fantatsika. Ireo mpikaroka dia tsy afaka nanontany ireo mpampiasa fa handoa ny kandidà na hanazava ny fanapahan-kevitr'izy ireo.
Ireo fanandramana roa ireo dia maneho betsaka momba ny fanandramana amin'ny lab sady amin'ny ankapobeny. Ny fanandramana ataon'ny laborato dia manolotra ny mpikaroka akaiky akaiky ny tontolo manodidina ny mpandray anjara. Noho izany, ohatra, nandritra ny fanandramana nataon'ny laboratoarika, i Correll sy ny mpiara-miasa dia afaka niantoka fa naverina novakina tamin'ny toerana mangina ny famerenana; Ao amin'ny fanandramana eny an-tsaha, ny sasany amin'ireo resadresaka dia mety tsy mbola novakiana mihitsy aza. Ankoatra izany, satria fantatry ny mpandray anjara ao amin'ny toeram-pianarana fa efa nianatra izy ireo, dia matetika ny mpikaroka dia afaka manangona angona fanampiny izay afaka manampy hanazava ny antony mahatonga ny mpandray anjara handray fanapahan-kevitra. Ohatra, i Correll sy ny mpiara-miasa dia nanontany ny mpandray anjara tamin'ny fanandraman'ny laboratoara mba handresena ireo kandidà amin'ny lafiny samihafa. Ireo karazana data ireo dia afaka manampy ireo mpikaroka hahatakatra ny rafitra misy fahasamihafana amin'ny fomba itondran'ny mpandray anjara ny famerenana.
Etsy an-daniny, ireo toetra mitovy ireo izay voamariko fa tombontsoa ihany koa dia heverina ho toy ny tsy fahampiana. Ny mpikaroka maniry ny fanandramana eo amin'ny sehatra dia milaza fa ny mpandray anjara amin'ny fanandramana avy amin'ny laboratoara dia mety ho hafa tanteraka satria fantany fa nodinihina izy ireo. Ohatra, nandritra ny fanandramana nataon'ny laboratoarika dia mety ho nitombona ny tanjon'ny fikarohana ny mpandray anjara ary nanova ny fitondran-tenany mba tsy hisehosehoana. Ankoatra izany, ireo mpikaroka izay tia fanandramana eny an-tsaha dia mety hanohitra fa ny fahasamihafana kely eo amin'ny resumen dia afaka mijanona ao anaty tontolo iray tena madio sy marefo, ary noho izany ny fanandraman'ny laboratoara dia handratra ny vokatry ny reny amin'ny fanapahan-kevitra tena izy. Farany, maro ireo mpikatroka amin'ny fanandramana eny an-tsena no manakiana ny fianteheran'ny laboratoara amin'ny mpandray anjara WEIRD: indrindra indrindra ireo mpianatra avy any amin'ny firenena tandrefana, manabe, indostrialy, manankarena ary demaokratika (Henrich, Heine, and Norenzayan 2010a) . Ny fanandramana nataon'i Correll sy ny mpiara-miasa (2007) mampiseho ireo extremista anankiroa ao amin'ny tontolon'ny laboratoire. Eo anelanelan'ireny extremista roa ireny dia misy karazana hevi-baventy ihany koa, anisan'izany ny famolavolana tsy mpianatra any amin'ny laboratoara na miditra an-tsaha saingy mbola misy mpandray anjara manao asa tsy mahazatra.
Ankoatra ny endriky ny labasy izay efa nisy taloha, ny taona dizitaly dia midika fa ny mpikaroka ankehitriny dia manana endrika lehibe faharoa izay ahafahan'ny fanandramana miovaova: analog-digital. Tahaka ny misy fanandramana atao amin'ny laboratoara madio, ny fanandramana momba ny saha madio, ary ireo hybrides samihafa eo anelanelan'izy ireo, dia misy ny fanandramana madio amin'ny alàlan'ny fanandramana, ireo experimentes dizitaly ary ireo karazana hybrides. Tena sarotra ny manolotra famaritana ara-dalàna an'io lanjany io, fa ny famaritana mahomby ampiasaina dia ny fanandramana nomerika tanteraka dia ny fanandramana izay mampiasa ny fotodrafitrasa nomerika mba hamerenana ny mpandray anjara, ny fialan-tsasatra, ny fitsaboana ary ny famerana ny vokatra. Ohatra, ny fanandraman'i Restivo sy van de Rijt (2012) momba ny barnstars sy Wikipedia dia fanandramana nomerika tanteraka, satria nampiasa fitaovana nomerika ho an'ny efatra amin'ireo dingana ireo izy. Toy izany koa, ny fanandramana feno tanteraka dia tsy mampiasa ny fotodrafitrasa nomerika ho an'ny iray amin'ireo dingana efatra ireo. Maro amin'ireo fanandramana malaza ao amin'ny psikolojia dia fanandramana feno tanteraka. Eo anelanelan'ireny extremista roa ireny dia misy fanandramana nomerika amin'ny ampahany dizitaly izay mampiasa ny rafitra analoga sy digital.
Raha mieritreritra momba ny fanandramana nomerika ny olona sasany, mieritreritra avy hatrany ireo fanandramana an-tserasera. Mampalahelo izany satria ny fahafahana mihazakazaka fanandramana dizitaly dia tsy anaty aterineto fotsiny. Ny mpikaroka dia afaka mametraka fanandramana nomerika ampahany amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana nomerika ao amin'ny tontolon'ny zavaboahary mba hanolorana fitsaboana na famaranana ny vokatra. Ohatra, ireo mpikaroka dia afaka mampiasa smartphones mba hanolotra fitsaboana na mpamantatra ao amin'ny tontolo natsangana mba handrefesana ny vokatra. Raha ny marina, araka ny ho hitantsika ato amin'ity toko ity, ireo mpikaroka efa efa nampiasa metatra an-trano an- (Allcott 2015) mba handrefesana ny vokatra amin'ny fanandramana momba ny fampiasana angovo mahakasika fianakaviana 8,5 tapitrisa (Allcott 2015) . Satria ny fitaovana dizitaly dia manjary mitombo hatrany amin'ny fiainan'ny olona sy ny mpamantatra izay tafiditra ao anatin'ny tontolo voaorina, hampitombo haingana ireo fahafahana mihazakazaka ireo fizaka nomerika dizitaly amin'ny tontolo hita maso. Amin'ny teny hafa, ny fanandramana nomerika dia tsy fanandramana an-tserasera fotsiny.
Ny rafitra dizitaly dia mamorona fomba vaovao ho an'ny fanandramana na aiza na aiza manerana ny kontinanta lab. Ao amin'ny fanandramana avy amin'ny laboratoara, ohatra, dia afaka mampiasa fitaovana dizitaly ny mpikaroka mba handinihana tsara ny fihetsiky ny mpandray anjara; Ohatra iray amin'izany karazana fitomboana manatsara izany ny fitaovana fitadiavana maso izay manome fepetra hentitra sy tsy mitsahatra mandaitra. Ny vanim-potoana nomerika dia mamorona ihany koa ny mety hisian'ny fanandramana momba ny laboratoara amin'ny aterineto. Ohatra, ireo mpikaroka dia nanapa-kevitra haingana ny Amazon Mechanical Turk (MTurk) hanangona mpandray anjara amin'ny fanandramana an-tserasera (sary 4.2). Ny MTOUR dia mifanandrify amin'ny "mpampiasa" izay manana asa izay tokony ho vita amin'ny "mpiasa" izay maniry ny hamita ireo asa ireo amin'ny vola. Ny tontolon'ny asa mahazatra kosa dia tsy mila minitra vitsy afa-tsy minitra vitsy, ary ny fifandraisana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia an-tserasera. Satria ny MTUR dia mamaly ireo endrika fanandramana nentim-paharazana - ny olona mandoa vola hamita ny asa izay tsy hataon'izy ireo maimaim-poana-dia mety ho an'ny karazana fanandramana sasany. Raha ny marina, ny MTUR dia namorona ny fotodrafitrasa momba ny fitantanana ny dobo mpandray anjara - fananganana sy fandoavana ny olona - ary ny mpikaroka dia nanararaotra izany fotodrafitrasa izany mba hiditra anaty dobo misy mpandray anjara foana.
Sary 4.2: Famoahana lahatsoratra avy amin'ny Amazon Mechanical Turk (MTurk). Ny MTOUR sy ny tsenan'ny asa hafa amin'ny aterineto dia manolotra fomba fijery mahazatra ny mpikaroka mba hanangona mpandray anjara amin'ny fanandramana. Nampifanarahina tamin'i Bohannon (2016) .
Ny rafitra dizitaly dia mamorona soso-kevitra bebe kokoa ho an'ny fanandramana tahaka izao. Amin'ny ankapobeny, afaka manampy ireo mpikaroka izy ireo mba hampifandraisina ny angon-drakitra mavesatra sy ny dingana mifandraika amin'ny fanandramana amin'ny laboratoara miaraka amin'ireo mpandray anjara samihafa kokoa sy ny toe-javatra voajanahary hafa mifandraika amin'ny fanandraman'ny laboratoara. Ankoatra izany, ny fanandramana nomerika nomerika dia nanolotra fomba telo izay sarotra tamin'ny fanandramana analoga.
Voalohany indrindra, raha toa ka manana mpandray anjara an-jatony maro ny fanadihadiana momba ny laboratoara sy ny fizahan-tany dia afaka manana mpandray anjara an-tapitrisany maro. Ity fanovana ity dia satria ny fanandramana nomerika sasany dia afaka mamokatra angona amin'ny vidiny miovaova. Izany hoe, raha vao namorona tranonkala fanandramana ny mpikaroka, ny fitomboan'ny isan'ny mpandray anjara amin'ny ankapobeny dia tsy mampitombo ny vidiny. Fampitomboana ny isan'ny mpandray anjara amin'ny alalan'ny toe-javatra ny 100 na mihoatra dia tsy hamaroan'isa fotsiny fiovana; Fiovana mahatalanjona izy io, satria ahafahan'ny mpikaroka hianatra zavatra samihafa avy amin'ny fanandramana (ohatra, fihenanam-po amin'ny fitsaboana) sy amin'ny famoronana endri-panandramana ara-pihetseham-po tanteraka (ohatra ny fanandramana goavana). Tena zava-dehibe tokoa io teboka io, hiverina any amin'ny faran'ny toko aho rehefa manolotra torohevitra momba ny famoronana dingana dizitaly.
Faharoa, raha ny fanandramana fikarohana sy ny fanadihadiana an-tsarimihetsika indrindra dia mitondra ny mpandray anjara ho toy ny widgets tsy misy dikany. Matetika ny fampiasana fakan-tsarimihetsika momba ny fakan-tsarimihetsika momba ny mpandray anjara amin'ny sehatry ny fikarohana sy fandalinana. Ity fampahalalana fototra ity, izay antsoina hoe fampahalalana mialoha momba ny fitsaboana , dia hita matetika amin'ny fanandramana nomerika satria mihazakazaka eo amin'ny rafitra fanaraha-maso mandrakariva (jereo ny toko 2). Ohatra, mpikaroka iray ao amin'ny Facebook dia manana fanazavana bebe kokoa momba ny olona momba ny fanandramana nomerika nomerika noho ny mpikaroka iray momba ny oniversite momba ny vahoaka ao amin'ny fanandramana an-tserasera. Ity fikarakarana alohan'ny fitsaboana ity dia mamela fanandramana fanandramana kokoa - toy ny fanakanana (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) ary ny famerenana ny fandraisana anjaran'ireo mpandray anjara (Eckles, Kizilcec, and Bakshy 2016) - sy ny fandalinana lalina kokoa - toy ny fanombanana ny heterogenité of effects effects (Athey and Imbens 2016a) ary fanitsiana ny fanamafisana ny fitomboana tsara (Bloniarz et al. 2016) .
Fahatelo, fa maro ny fanadihadiana momba ny laboratoara sy ny zana-trondro dia manolotra fitsaboana ary mamaritra ny vokatra amin'ny vanim-potoana misim-pitenenana, ny sasany amin'ireo fanandramana nomerika dia mitranga mandritra ny fotoana lava be. Ohatra, ny fanandraman'i Restivo sy van de Rijt dia nahitana ny valim-panafody isan'andro nandritra ny 90 andro, ary iray amin'ireo fanandramana izay holazaiko anao amin'ny manaraka (Ferraro, Miranda, and Price 2011) toko (Ferraro, Miranda, and Price 2011) nanaraka ny valiny nandritra ny telo taona tamin'ny tsy misy. vidiny. Ireo karazana telo ireo, ny habaka, ny fitiliana ny fitsaboana ary ny fitsaboana lava sy ny taham-pahalalana dia mitranga matetika rehefa mihazakazaka ny fanandramana eo amin'ny rafitra fandrefesana mandrakariva (jereo ny toko 2 ho an'ny fanaraha-maso mahazatra).
Raha manolotra fahafaha-manao maro ny experientures amin'ny sehatra nomerika, dia mizara fahalemena ihany koa izy ireo miaraka amin'ny laboratoire analônika sy ny fanadihadiana an-tserasera. Ohatra, ny fanandramana dia tsy azo ampiasaina handinihana ny lasa, ary izy ireo dia afaka manombana fotsiny ny vokatry ny fitsaboana azo atao. Ankoatra izay, na dia tsy azo antoka aza ny fanandramana ny fitarihana ny politika, dia voafetra ihany ny fitarihana azony omena noho ny fahasarotana toy ny fandoavana ny tontolo iainana, ny olana momba ny fanarahan-dalàna, ary ny fiantraikan'ny (Banerjee and Duflo 2009; Deaton 2010) . Ny fanandramana ny sehatra dizitaly dia manandratra ihany koa ny olana ara-etika noforonin'ireo fanandramana eo amin'ny sehatra - lohahevitra iray horesahiko taty aoriana ato amin'ity toko ity sy ny toko faha-6.